Joe biden Oo Weerar Culus Ku Qaaday Madaxwayne Trump Iyo Waxyaabaha Uu Ku Dhaliilay - Borama News Network %
Joe biden Oo Weerar Culus Ku Qaaday Madaxwayne Trump Iyo Waxyaabaha Uu Ku Dhaliilay
Musharaxa xilka madaxweynenimo ee Mareykanka, Joe biden ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday madaxweynaha xilka haya ee dalkaas, Donald Trump.
Joe ayaa Trump ku eedeeyay in si aan wanaagsaneyn uu u maareeyay xanuunka corona. Mar uu ka hadlayay magaalada uu kasoo jeedo ee Wilmington waxaa uu sheegay in dedaalkii ay soo sameeyeen shacabka Mareykanka uu hal bacaad lagu lisay ka dhigay madaxweyne Trump oo uu sheegay in uu iska indha tirayo tallooyinka caafimmaad ee ay soo jeediyeen seynisyahanada.
Waxaa kale oo uu sheegay in uusan wax olole ah qabanin doonin inta uu jiro feyraska corona.
“Xilligan waa xilli aanan horay loo arag dunida casriga ah,” ayuu yiri Biden oo ka hadlayay shir jaraa’id oo uu qabtay.
Madaxweyne Trump ayaa isu soo bax uu ku qabtay magaalada Tulsa ee Oklahoma bishii aynu soo dhaafnay waxaa ka qeybgalay dad aad uga yara intii la filayay, waxaana markii dambe kooxdiisa ololaha doorashada ay ku dhawaaqeen in aanay qaban doonin olole dambe.
Ra’yi uruurin la sameeyay ayaa muujineysa in Biden uu aad ugu horeeyay dhanka saadaasha doorashada Mareykanka ka dhici doonta dhammaadka sanadkan, waxaase waxwalba ay kala caddaan doonaan marka la gaaro bishan Nofembar ee sanadkan.
Joe Biden ayaa maalma kahor sheegay in uu raaci doonaa tallooyinka caafimmaad ee ay soo jeediyaan khubarada caafimmaadka, taasina ay sabab u tahay joojinta ololahiisa doorashada.
Biden oo soo noqday madaxweyne ku xigeenkii hore ee xukuumaddii Barrack Obama ayaa sidoo kale sheegay in wali uusan iska baarin Covid 19, oo dalka Mareykanka ku dilay dad ka badan 130 kun oo qof.
Biden ayaa aad u yareeyay kullamada dadka uu la yeelanayo, waxaana hoygiisa uu ka sameystay stuudiyo, halkaas oo uu wareysiyada ka bixiyo, balse qolyaha taabacsan Trump waxay ku tilmaameen “nin dhuuntay”.
Biden waxaa kale oo uu sheegay in Trump uu garan waayay wixii ay garteen hogaamiyeyaasha kale ee caalamka.
“Bil ba bisha ka dambeysa ,hogaamiyeyaasha caalamka waxay qaadayaan tallaabooyin lagu xakameynayo cudurka, Donald Trump na waa uu ku guuldarreystay”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Biden.
Hadalka Joe ayaa imaanaya xilli madaxa cudurrada faafa ee dalka Mareykanka Dr Anthony Fauci uu aqalka sare ee Mareykanka u sheegay in aanay la-yaab noqon doonin haddii maalintiiba dalka Mareykanka lagu arko inkabadan boqol kun oo kiis oo feyraska corona.
“Dhab ahaantii hadda wax aan gacanta ku heyno malahan,” ayuu yiri Dr Fauci oo ka digay in dad badan oo shacabka Mareykanka aanay ku dhaqmin tallooyinka caafimmaad ee loo soo jeediyay oo ay kamid tahay kala fogaanshaha iyo maaskarada afka lagu xirto.
Talaadadii u dambeysay, inkabadan 40 kun oo kiis ayaa laga soo sheegay dalka Mareykanka.
Wasiir Jamaal “Shaqo Ay Qaban Karaan Soomaali Ayaa Ajaanib Ku Qabtaan Xalane”
Toos :- Munaasibada Dalbaal Dega 1 Da Luuniyo Iyi Qudbada Madaxwayne Farmaajo
Dowlada Hoose Ee Degmada Gabilay Oo Gubtay Alaabo Dhacay Oo Ay Ka Soo Ururisay Gabilay
Dalka Ciraaq Oo Yeelanaya Raysal Wasaare Cusub Muddo Afar Bilood Ah Ka Dib
Bnnstaff Bnnstaff March 18, 2020
Bnnstaff Bnnstaff March 26, 2020